Mhepo inotonhorera inogona kushandiswa kupisa muchando here? | Lianchuang
Mhepo inotonhorera inogona kushandiswa kupisa muchando. Mhepo inotonhorera yakakamurwa kuita maviri marudzi: imwe imwe firiji yerudzi rwemhepo inotonhorera, uye imwe inotonhora uye kupisa kaviri-kuita mhepo inotonhorera. Iyo yekutanga inogona kungove firiji, uye iyo yekupedzisira haingogone chete kuita firiji asiwo kupisa, asi mutengo unodhura pakuenzanisa.
Chenjedzo yekushandisa iyo yekupisa basa remhepo inotonhorera munguva yechando:
1. Paunenge uchidira mvura, shandisa mvura yakachena zvakanyanya sezvinobvira kudzikisa kukura kwebhakitiriya panguva yekudonha mvura. Uye zvakare, iyo mvura iri mutangi inofanira kuwedzerwa kazhinji uye kuchinjwa nguva dzose.
2. Mushure mekunge mhepo inotonhorera yamhanya kwenguva yakareba, kuvharika kweguruva nemarara kuchachinja vhoriyamu yemhepo uye kutonhodza mhedzisiro yefirita nemhepo keteni. Zviri nani kuichenesa vhiki mbiri dzese.
3. Paunenge uchishandisa mhepo inotonhorera, chinhambwe hachifanirwe kunge chiri padyo zvakanyanya. Kana zvichidikanwa, funga kushandisa zvimwe zvinodzikisira nzvimbo kana zvivakwa zvekudzikisa humidhi.
Mhepo inotonhorera ine tembiricha ye5-6℃ yakaderera pane yakajairika mafeni. Ivo vane yakaderera simba kushandiswa uye nemutengo wakaderera. Zvimwe zvinogadzirwa zvakare zvine basa rekudziya mweya uye kuwedzera zvisina kunaka ioni. Iwo madiki muhukuru uye nyore kufamba. Iyo inotonhora thana fan, uye inoshandisa mashoma simba pane inoisa mweya. Kechipiri, iyo yekudziisa mweya fan ine akasiyana mabasa (isina kunaka ion / kudziyisa mweya, nezvimwewo), iri nyore kufamba.
Chekupedzisira, pazasi pemhando mbiri dzemhepo inotonhorera uye hita ndeyako mareferenzi. Isu tinovimba unovada.
Muenzaniso kwete. DF-AF2808Khttps://www.gdszlian.com/df-af2808k-portable-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- ne-oscillation-inobviswa-mvura-tangi-2-kupisa-kumisikidza-eco-basa-imd-kutonga-chigadzirwa /
Muenzaniso kwete. DF-AT2501KG1https://www.gdszlian.com/df-af2501kg1- tower-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- ne-oscillation-90oscillation-2-kupisa-kumisikidza-eco-basa-kubata-kutonga-chigadzirwa /